डा. केसीका मागप्रति संवेदनशील बन्न सरकारलाई आयोगको सुझाव – Health Post Nepal
डा. केसीका मागप्रति संवेदनशील बन्न सरकारलाई आयोगको सुझाव
२०७७ असोज ९ गते १४:४५
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै अनशनरत डा. केसीका मागप्रति सरकारलाई संवेदनशील बन्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुझाव दिएको छ। शुक्रबार मानवअधिकार आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो आग्रह गरेको हो।
विज्ञप्तिमा सरकारले डा. केसीसँग विगतमा गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न पनि अपिल गरेको छ।
‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अस्थिर रहेको, शरीरको पोटासियम, म्याग्नेसियम र ग्लुकोजको मात्रा कम हुँदै गएको, पटक–पटकको अनशनका कारण शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाले संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको बुझिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगले संघलगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरूले डा. केसीको जीवनरक्षाको पहल गरिदिन आयोगमा ज्ञापन पत्रले बुझाएकाले ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख बताएको छ।
विज्ञप्तिमा अघि भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा जस्तो आधारभूत मानवअधिकारको विषयप्रति संवेदनशील हुन, डा. केसीसँग नेपाल सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताप्रति गम्भीर हुँदै सार्वजनिक गर्न, जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न पनि आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
डा. गोविन्द केसी विगत १२ दिनदेखि अनशनमा छन्। उनले १९ औं अनशन भदौ २९ गतेदेखि जुम्लामा सुरु गरेका थिए। ९ औं दिनका दिन आफ्नो अनशनलाई काठमाडौंमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेर उनी काठमाडौं आएका थिए।
अहिले उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालको जनरल वार्डमा आमरण अनशनमा छन्। यस्तै, सरकारले उनले राखेका माग पूरा गर्न सकिने खालका नरहेको पनि बताएको छ।